सुरु औषधि पसल प्रसाधन सामग्री र स्वच्छता दाढी Trimmer
एक दाढी Trimmer एक Musthave छ - कुनै कुरा छैन कि यो तीन-दिन दाढ़ी वा पूर्ण दाढ़ी हो।
दाखिला एक प्रवृत्ति हो जुन वर्ष भर जारी छ र सबै उमेरका पुरुषहरु द्वारा अपनाईएको छ। काठको टुक्राहरू जस्तै, केही पुरुषहरू आफ्ना दालहरू बढ्न सक्छन् - यो सजिलो छ र कुनै थप कार्य आवश्यक पर्दैन। वृद्धि नियन्त्रण गर्न सजिलो छैन।
सामान्यतया, दाखिला भएका पुरुषहरू आफ्नो दाँत र खुवाउनु पर्छ। राम्रो तरिकाले पकाएको दाँतको मात्र सम्भावना उचित दाईको हेरचाह हो, अर्थात् प्रतिबद्धता, सही हेरचाह उत्पादन र: दाढ़ा ट्रिमर। शरीरको कपाल नजिकको बलियो व्यक्तिको छविसँग जोडिएको छ र निश्चित हदसम्म तपाईंको व्यक्तित्वको प्रतीक हुन्छ। एक दाढ़ी धेरै धेरै सकारात्मक कम्पन हुन्छ। विश्वास, बुद्धि, साहस, शक्ति। महिलाहरू दाजुभाइलाई भेट्छन्।
तर आफ्नो दाढी को आकार र रुप कायम राख्ने बस ब्रेगिङ्ग भन्दा बढि छ। जस्तै दाढी भविष्यमा जस्तो हुनुपर्छ तपाईं दारी Trimmer प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ अघि, छलफल हुनुपर्छ। तपाईं क्लासिक5बजे छाया (दाढी वृद्धि, 17 विरुद्ध यति समय बन्द मा एक: म बिहान shaved भने 00 हेर्न अनुहार पराउँछु) चाहनुहुन्छ वा देखि एलन गार्टनर भन्दा Zach Galifianakis, फिल्म जस्तै राम्रो गर्न चाहनुहुन्छ Hangover ज्ञात छ? छाला हेरविचार? दाढी कपाल को हेरविचार?
हरेक मानिसलाई नियमित रूपमा दाखिला काट्न कत्तिको महत्त्वपूर्ण थाहा हुनुपर्छ, किनकी धेरै फाइदाहरू उपस्थितिमा छन्, केहि चीजहरूले तपाईंको दाँतलाई खराब र अपरिचित बनाउन सक्छ। उदाहरण:
अनुहारको कपाल स्कुल छालाको प्रलोभनमा छ। विशेष गरी अँध्यारो कपाल प्रकारको अवस्थामा, छालाको सेतोहरू अधिक देखिन्छन् र समयको साथ दाँतमा टाँस्छन्।
अधिक कपाल = अधिक छाला जलन
सूक्ष्म जीवविज्ञानीहरूले फेला पारेका छन् कि बीउहरूमा धेरै जीवाणुहरू भेटिन्छ जुन ब्याक्टेरियामा तुलनात्मक हुन्छ जुन हामी सामान्यतया शौचालयमा भेट्टाउँछौं! दाँतको छेउमा, छाला मोटाई अन्य छाला रोगको साथ संयोजनमा मुँहासे ल्याउन सक्छ।
सही अनुहारको लागि खोज्नुहोस् जुन तपाईंको अनुहार प्रोफाइल फिट हुन्छ। केही समय खोजी गर्न खोजी र चलाउन समय लिनुहोस्। राम्रो दाँत ट्रिमर प्रकार्य, अनुप्रयोग प्रोफाइल र मूल्य तिर्न इच्छुक हुनुहुन्छ को एक वोट हो। र हरेक हेरविचार उत्पादन जस्तै, त्यहाँ धेरै महत्त्वपूर्ण कारकहरू छन् - प्रविधि र सहमति - जसले तपाइँको ट्रिमर चयन गर्न ठूलो भूमिका खेल्छ।
गुणस्तर: लक्ष्य एक दाई ट्रिमर किन्न छ, जहाँ तपाईंसँग लामो समय सम्म छ। मोडेलहरूको जिनका ब्लेडहरू फर्म ग्रिड नियन्त्रणको साथ स्टेनलेस स्टीलको बनाइएका छन्।
कर्ड वा ताररहित संग: केही परम्परागतहरूले थप शक्ति र अनिकासको रस गर्दछन्। जबकि अन्य पोर्टेबिलिटी र आफु को लागि एक वायरलेस मोडेल को सुविधा को आनंद ले रहे हो। सबैलाई निर्णय गर्न को लागी त्यो किस प्रकारको छ।
सूखी भिजेको Trimming
कुनै पनि कुरा छैन कि सुत्न वा गीला। प्रत्येक ट्रामिंगमा यस्तै फाइदाहरू छन्। यद्यपि, गीला र सुत्न बीचको स्विच गर्न निकै ठिक हुन्छ।
लम्बाइ सेटिङहरू: छोटो, मध्यम वा लामो? सुँगुर वा स्टबल? विभिन्न लम्बाइ विकल्पहरूसँग ट्रिमरले तपाईंलाई चाहानु भएको प्राप्त गर्न मद्दत गर्न सक्दछ।
बहुमुखीता: कान ट्रिमर वा ट्रिमरको साथ वैक्यूम प्रणाली। अतिरिक्त अनुभवको साथ आफ्नो अनुभव बनाउनुहोस्।
दाँत ट्रिमर खरिद गर्दा के हेर्न खोज्नु हुन्छ?
आफ्नो दाहिने ट्रिमर छनौट गर्दा यी कुराहरू ध्यानमा राख्नुहोस्:
शक्ति - अधिक शक्ति भनेको अधिक टकराक हो, यसको मतलब छ कि अधिक मूंछ एक पास मा ट्रिम गरिएको छ।
ब्याट्री जीवन - सान्त्वना एक लामो ब्याट्री जीवन र चार्ज समयको साथ आउँछ।
व्यावहारिक - व्यावहारिक एक दाँत कटर छ, जो धोने योग्य छ र तपाईंको समय बचत गर्दछ। वा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यात्रा गर्दा डबल वोल्टेजमा स्विच गर्न सकिन्छ।
सफा गर्न सजिलो - उत्तम ट्रिमरहरू हटाउन सकिने टाउकाहरू छन् जुन हटाउन र सफा गर्न सकिन्छ, जसले तपाइँलाई बाँचेको कालो ब्लेड राख्न मद्दत गर्दछ।
सबै माथिको मापदण्ड एक स्मार्ट खरिद निर्णय कसरी गर्ने भन्ने बारे सामान्य नराम्रो विचार प्रदान गर्दछ। आफैलाई सोध्नुहोस् कि तपाईं कसरी आफ्नो ट्रिमर प्रयोग गर्नुहुन्छ। स्नानमा अन्य शरीर क्षेत्रहरू ट्रिम गर्न?
फिलिप्स शृंखला 7000 वैक्यूम Bartschneider BT7220
यसको लागि उत्तम: सफा र साफ ट्रिम
तपाईलाई थाहा छ: ब्लेडहरू "रखरखावको लागि तैयार" छन् र कुनै तेलको आवश्यकता छैन - कम से कम केहि महिना सम्म।
7000 दिन दाढ़ी समारोह संग फिलिप्स सीरीज3वैक्यूम दाढ़ कटर BT7090 / 32, कालो
एकीकृत वैक्यूम प्रणाली कट-अफ दाईको बाल संकलनको लागि प्रयोग गरिन्छ
सम्राट एक सटीक र पनि परिणाम प्रदान गर्दछ
18 समायोज्य लम्बाइ, 1 मिमी देखि 18 मिमी फिलिप्स जूम मार्फत
75 मिनेटको साथ लिथियम-आयन ब्याट्री 1 Std मा काट्ने समय। चार्ज समय
डिलिवरीको दायरा: बारट्सचाइडर, 1 कङ्क संयोजन संलग्न, 1 विवरण संयोजन संलग्न, 1 सफाई ब्रश, 1 भण्डारण पाउच
निष्कर्ष: सुपर स्टाइलिश, सुपर शक्तिशाली, फिलिप्स वैक्यूम Barttrimmer BT7220 एक हेरविचार "फ्लैगशिप" हो। एक विशेष विकसित वैक्यूम प्रणाली ट्रिममेड क्यान्सर उपकरणको ह्यान्डलमा समात्दछ। यसले द्रुत र सजिलो निपटाउन सम्भव बनाउँछ। आफ्नो फर्श राख्नुहोस् र बेसिन सफा गर्नुहोस्। समायोजन योग्य ब्लेडले विभिन्न पट्टी शैलीहरू ट्रिमिङ गर्दा पूर्ण रूपमा काम गर्दछ। त्यो कपाल टाँस्न बिना अनुहारमा राम्ररी चम्किलो पार्छ। सज्जन ग्लेडिंग द्वारा, ट्रिमरले सूजन र छाला जलन कम गर्छ। लामो समयसम्म ब्लेड अतिरिक्त तेलको बिना आउँछ। पानी चलिरहेको पनि सफा ब्लेडमा फरक पर्दैन। पुरानो मोडेल BT7090 सँग टर्बो बटन छ। यसले छिटो परिशुद्धता संग मोटो कपाल काट्न ब्लेड र गति गति बढाउँछ। 20 लक-इन लम्बाइ सेटिङहरू उपलब्ध छन्, 0,5 मिटर र 10 मिटर सम्मको "आधुनिक" Vikings को लागि उपलब्ध छ। उत्कृष्ट ब्याट्री प्रदर्शन यो ट्रिमरको अर्को विशेषता हो। एक घण्टाको एक मात्र चार्ज संग, दाँया ट्रिमर 80 मिनेटको प्रयोगमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
फिलिप्स श्रृंखला 7000 भ्याकुम दाह्री ट्रिमर BT7220 / 15, कालो / चाँदी सूचक
एकीकृत वैक्यूम प्रणाली कट-अफ दाई कपाल हटाउन र सफा स्नान सुनिश्चित गर्न प्रयोग गरिन्छ
पेटेंट बालुवा काटेर स्टेनलेस स्टील ब्लेडलाई अझ राम्ररी प्रभावकारी बनाइयो
20 समायोज्य लम्बाइ, 0,5 मिमी देखि 10 मिमी फिलिप्स जूम मार्फत
पुरा तरिकाले धोने योग्य ब्लेड को लागि सजिलो सफाई, 80 मिनेट ब्याट्री लाइफ
वितरणको दायरा: दाढ़ा ट्रिमर, परिशुद्धता चिन्ता,2डेटासेट कवर, भण्डारण बैग, ब्रश सफा गर्नुहोस्
यसको लागि उत्तम: दाढी स्टाइल
तपाईलाई थाहा छ: शक्तिशाली दोहरी ब्याट्री प्रणालीले 50 मिनेट पाउरोल ट्रामिंग को अनुमति दिन्छ। निष्कर्ष: मञ्चमा नयाँ मोडेल को एक, Brauns नव आगन्तुक कम्पनी को अवार्ड विजेता बिजुली धूर्त संग सजिलै भ्रमित गर्न सकिन्छ भनेर एउटा सुन्दर र स्लिम प्रिमियम नजर छ। को भूरा BT5090 दाढी Trimmer एक अति तेज ब्लेड त्यसैले 25 सटीक सेटिङहरू प्रस्ताव आउँछ। को सटीक पाङ्ग्रा 0,5mm सेटिङहरू 25mm प्रदान गर्दछ। उच्चतम सेटिङ छाँटिँदै एक bushy दाढी प्रदान गर्दछ। मर्मतका सरल छ: पानी चलिरहेको मलबे र बाल effortlessly हटाउँदछ अन्तर्गत ब्लेड निस्तब्धता। उपकरण विशेष दोहरी-ब्याट्री सिस्टम एक बस5मिनेट छिटो चार्ज को एक ट्रिम लागि पर्याप्त शक्ति निर्माण गर्छ कि विशेषताहरु किनभने ब्याट्री जीवन, सबै भन्दा ठूलो विशेषता रहनेछ। एक घण्टा बराबर कट 50 मिनेट ताररहित छ। स्लाइड र शैली समारोह पनि किनारा शैली लागि उपयोगी छ।
ब्राउन दाढी ट्रिमर / दाह्री ट्रिमर BT5090, 25 लम्बाई सेटिंग्स सहित, प्रिसिसन ट्रिमर, चार्ज स्टेशन र केस, चाँदी सूचक
सही ट्रिमिंग र स्टाइल। उत्कृष्ट दृश्यको लागि बारट्सटेइडर र बार्टट्रिमर: सटीक लम्बाइ र तीव्र समोच्च
को दाढी Trimmer को 25 लम्बाइ सेटिङहरू अनुरूप सटीक संग विश्वसनीय र दोहोर्याउन मिल्ने परिणाम प्रदान गर्दछ
सटीक कपाल काटेर लाइफटाइम तेज ब्लेड
50 मिनेट ट्रिमिंगका लागि शक्तिशाली दोहोरो ब्याट्री प्रणाली
हिँड्ने पानीको अन्तर्गत सुलभ सफाईको लागि हेयर ड्रायर पूर्ण रूपमा धुलो हुन्छ
यसको लागि उत्तम: संवेदनशील छाला प्रकार
तपाईलाई थाहा छ: मोज़ेक डिजाइनले आफ्नो शक्तिशाली इन्जिनलाई पूरै बनाउँछ
निष्कर्ष: वर्षा र शेन तपाईंको दाँत ट्रिमरमा जहर हुन सक्छ यदि तपाईं ईआर-GB40-S मा चढ्नु भएको छैन। एक विशेष सफाई सञ्झ्यालले अनुहार सफा गर्न सजिलो बनाउँछ र ट्रिममरलाई पानीमा पूर्णतया विसर्जन गर्न सक्षम गर्दछ। ब्लेड प्रणाली एक तीव्र 45 डिग्री कोण मा सटीक जमीन हो। यसले तराई र दाढ़ाको हेरविचार सरल बनाउँछ। दुर्भाग्यवश सबै दाँत ट्रिमरहरूको लागि कम हुन्छ। धेरै ट्रिमरहरूले प्लास्टिक ह्याण्डल प्रयोग गर्छन्, जुन सफा गर्न सजिलो छ तर आवश्यक समर्थन प्रस्ताव गर्दैन। Panasonic ER-GB40-S ergonomic, rubberized grip संग आउँछ। यो हातमा राम्ररी राखिएको छ। सन्तुलित वजन र अधिकतम नियन्त्रणको कारण यो ट्रिमरले तपाईंको अनुहारको कपालमा चमक दिन्छ। यद्यपि मोटर शक्ति प्रतिस्पर्धा भन्दा कम छ, यसले दाँतको वर्दी बनाउन र यसको समर्थन गर्न पर्याप्त बल उत्पन्न गर्दछ। ER-GB40 S सँग 19 फरक लम्बाई सेटिङहरू छन्, जुन छोटो फज र लामो पेटी ट्रिम गरिएको छ। क्लासिक निकेल-धातु हाइब्रिड ब्याट्रीले 50 मिनेटको बारेमा 15 मिनेटको लागि शक्ति प्रदान गर्छ।
मेरो ट्रिमर फेला पर्यो। अब यो जान सक्छ
ट्रामिंगको साथ हाँ - हेरचाह के हो? प्रारम्भिक रूपमा लिखित रूपमा, तपाईंको दाँत सबै प्रकारका फोहोर र जीवाणुहरूको लागि प्राकृतिक जाल हो। एक सुन्दर दाँतलाई पनि समान बोर्टोलको हेरचाह छ। यसबाहेक, प्रत्येक दाँत मानिसको रिपोर्टरमा दाँतको दाग हराउन हुँदैन। राम्रो दाँत ट्रिमर जस्तै, कपालको कचौरामा अलमल्याउने हुँदैन। उनीहरूले हेरचाहको समर्थन गर्छन् र कपाल धुलो र स्वस्थ बनाउँछन्।
अघिल्लो लेखबेबी स्विंग
अर्को लेखफिटनेस पेट मांसपेशी बेल्ट
इलेक्ट्रिक ध्वनि टूथब्रश